Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo ka hadlay Dilkii Xildhibaan ka tirsan Puntland – SBC
Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo ka hadlay Dilkii Xildhibaan ka tirsan Puntland
Posted by Webmaster on January 28, 2012 Comments
Madaxweyne ku xigeenka Puntland Gen C/samad Cali Shire ayaa maanta kulan saxaafadeed uu ku qabtay aqalka Madaxtooyada Puntland ee Garoowe waxa uu kaga hadlay dilkii degmada Baargaal ee Gobolka Bari loogu geystay maalin nimadii shalay Xildhibaan ka tirsan Dowlada Puntland laguna magacaabay Bile Maxamuud Yuusuf.
Madaxweyne ku xigeenku waxa uu uga tacsiyeeyay umada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland dilkaasi loo geystay Xildhibaan Bile gaar ahaan waxa uu tacsi uga diray Eheladii iyo Qaraabadii uu ka baxay Xildhibaanka isagoona ugu doceeyay in uu Samir iyo iimaan alle ka siiyo isagana janadii Fardowso Alle ka waraabiyo.
Gen C/samad Cali ayaa sidoo kale sheegay in Xiliga la dilay xildhibaanku uu ku guda jiray howlihiisii shaqo islamarkaana uu dilay nin sida uu sheegay horay xildhibaanku uga siidaayay Xabsiga laguna magacaabo Xareed Ciise iyo koox burcad ah oo uu watay waa sida uu hadalka u dhigaye.
Waxa uu madaxweyne ku xigeenku intaasi ku daray In dowlada Puntland ay ka go’antahay sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen kooxahaasi ka dambeeyay dilka Xildhibaanka Maxkamad sharci ahna lagu qaadi doono.
Gelinkii dambe ee Shalay ayay aheyd marka uu soo baxay warka xaqiijinaya dilka xildhibaan Bile Maxamud Yuusuf oo ay kooxo hubeysani dil ugu geysteen Degmada Baargaal.
C/casiis Axmed Ibraahim Ok